Sunday June, 24 2018 - 09:54:26
Tuesday April 14, 2015 - 08:12:44 in by salman abdi
Dhammaanteen waxa aan isla qirsanahay dhibaatada iyo xanuunka qabyaaladu leedahay, waxa aan isku aragti ka wadanahay qabyaaladu in ay taha Xanuun ina wada taabtay laakiin dawadiisii aan ka werwareegayno....
Dhammaanteen waxa aan isla qirsanahay dhibaatada iyo xanuunka qabyaaladu leedahay, waxa aan isku aragti ka wadanahay qabyaaladu in ay tahay boog bugta oo bulshada ku taala. Oo lidi ama cagsi ku ah horumarka, wada jirka iyo wada noolaanshiyaha bulshada.
Waxaa la wada yiqiinsan yahay in qabyaaladu tahay astaanta burburka, kala taga iyo tafaraaruqa ummada.
Waan wada dareensanahay inta qabyaalada aan dawo loo helin in aan lagu riyoonkarin bulsho saxal baxsan oo dhanka horusocodka u wada dhaqaaqda.
Goobkasta oo lagu kulmo waxa lagaga sheekaystaa aafadaa qaranka la degtay, xafladdaha jaamacaduhu ku qalin jabinayaan, xafladaha dhaqanka, xafladaha xusaska maalmaha gaarka ah, masaajidada, bandhig hibeedyada, iyo meelaha kale dhallinyaradu ku caweeyaanba waxaa carrabka lagu adkeeyaa oo lagu diiqdiiqsadaa xanuunkaa ina wada gaadhay ee ina kala qoqobay sidii looga taqalusilahaaa.
Siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafidkaba iyo kuwa madaxanaanba, aqoonyahanka kala duwan ee dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ku sugan,culimada, dhallinyarada sida ay u dhanyihiinba, ganacsatada heerarkooda kala sareeya, haweenka, iyo qurba joogtuba waxa ay ka siman yihiin dhaliilista iyo iska fogeynta qabyaalada.
Xisbiyada siyaasada wadanka ka jira midkasta barnaamujkiisa siyaaaadeed waxaa ku cad in ay bulshadu u simantahay oo xisbigaba loo dhisay midaynta dadka iyo dalka.
Waxaa jira ururro badan oo wacyigelinta iyo la dagaalanka qabyaalada loo yegleelay, waxaa soo baxay oo faafay qoraalo iyo buugaag farabadan oo lagaga hadlay arrintan. Waxaa la qabtay doodo dhawr ah oo furdaaminta dhibaatadan lagu gorfeeyey.
Iyada oo intaa aan soo xusnay iyo in kaleba jiraan Hadana waynu aragnaa bilkasta iyo sanadkasta ba qabyaalada iyo wajiyadeeda way sii laban laabmayaan oo maalinkasta qaab cusub ayey la soo baxaysaa wax kusii kordhamooyee waxna kama dhacaan.
Waxaaban odhan karnaa hadda ayey xadhkaha sii goosatay oo meel aanay waligeed gaadhin bay gaadhay, waxaa loo sii kala baxay jifojifo, ardaa ardaa iyo qoys qoys, waanay sii socotaa oo waxaabay ku sii dhawdahay in ay gaadho labadii walaalaha ahaa ee kala bahda ahaa in ay kala tagaan.
Haddaba su`aasha is waydiinta lihi waxay tahay halkay wax iska qaban laayi`iin?. Kooxahaa aan sare ku soo xusnay kuwee aan daacad ka ahayn arrintan ayaan odhan karnaa?. Maxaa wacyigelintii fashiliyey oo halbacaad lagu lisay ka dhagay? IRK.
MALAA IN CARRABKA LAGA DHIGO AYAABA DHAAMI LAHAYD!!
Jawaabtu way inoo wada taalaa!!! Laakiin anigu waxa aan ku soo koobayaa wacyigelinteena aan dib ugu noqono oo saxno halkaas ayey wax ka qaloocdeene.
Caalamka:-Waa Maxay ujeedada dowlada Turkigu leedahay taageerada ay siiso Soomaaliya?
28/05/2018 - 09:31:41
Somalia:-Golaha Wasiirrada Soomaaliya oo meel mariyay sharciga duulista hawada+Maxay Ay Ka Yidhi Dagaallka Tuka-raq.
17/05/2018 - 17:17:57
Burco: Bulshada Ku Nool Burco Maxay Ka Yidhaahdeen Xuska 18May Se Sidee Looga Dareemayaa
01/05/2018 - 15:42:48